Habab Cusub Oo Aad Iskaga Ilaalin Karto Cudurka Macaanka Noociisa Labaad | Berberatoday.com
Hargeysa(Berberatoday.com)-Qormadan waxa uu Geeska Afrika akhristayaashiisa ugu soo bandhigayaa shank a mid ah habab uu dhowaan sheegay Dr. Maxamed Oz in looga hortegi karo cudurka Macaanka oo muddooyinkan dambe si aad ah dunida ugu sii badanaya. Qormadan oo uu Geeska Afrika turjumay, soona koobay waxa uu ka soo xigtay shabakadda Webteb oo ka faalloota arrimaha caafimaadka:
Cabbista Bunka: Cilmibaadhis natiijadeedu soo baxday sannadkii 2014ka ayaa lagu ogaaday in qofka oo maalintii cabba 3 illaa 4 koob oo bun ahi ay yaraato cabsida ah in qofkaas uu cudurka Macaanka noociisa labaad ku dhaco. Khubarada caafimaadka ee daraasaddaas samaysay waxa ay sheegeen in aanay waxba ku kala duwanayn marka uu bunku yahay mid Caffeine leh iyo marka uu yahay nooca laga siibay Caffeine ta. Laakiin waxa ay ku taliyeen in bunka laga ilaaliyo ama aad loogu yareeyo sonkorta lagu darayo.
Sidoo kale waxa ay khubaradu sheegeen in geedka Qolofalka la yidhaahdaa uu qayb libaax ka qaato yaraynta maadadda Guluukoosta ee jidhka ku jirta, taas oo macnaheedu yahay in sonkortu hoos u dhacayso.
Waxa se muhiim ah in la xasuusnaado in khubarada caafimaadku ay marar kala duwan ka digeen in qofka leh, dhiig-karka, wadne xanuunka iyo xitaa kelyo xanuunku uu isticmaalo bunka, oo ay sheegeen in maadadda ku jirta ee Caffeine ay khatar ku tahay xaaladaha aynu sheegnay.
Jimicsiga: Muddo dheer ayaa ay khubarada caafimaadku siyaabo kala duwan u soo bandhigayeen faa’idooyinka caafimaad ee jimicsigu uu jidhka u leeyahay. Waxa ay dhakhaatiirtu si aad ah ugu taliyaan in qofka leh dhiig-karka, wadne xanuunka iyo macaankaba uu jimicsigu u fiican yahay, qofka aan lahayn intaas aynu soo xusnay ee jimicsadana ay u noqoto ka hor-tag uu cudurradaas kaga fogaan karo.
Cilmibaadhis kale oo ay dhowaan samaysay jaamacadda caanka ah ee Harvard oo dalka Maraykanka ku taalla, ayaa lagu sheegay in baadhitaanno muddo 8 sano ah la waday ay iftiimiyeen in dadka jimicsiga iyo xarakaadka jidhak sameeya ugu yaraan 150 daqiiqo toddobaad kasta, ay si muuqata hoos ugu dhacdo khatarta looga cabsi qabo in cudurka macaanku ku dhaco.
Source Wargeyska Geeska Afrika